रंगमन्च : मीमांसाको दंश
गत मंगलवार मण्डला थिएटर अनामनगरमा मीमांसा हेरेपश्चात अझैसम्म त्यसको दंश अनुभव गर्दैछु । सक्ड, स्तम्भित । आत्माको रहस्य उधिन्न, आत्माको मीमांसा गर्न मञ्चित नाटक धेरै हदसम्म उत्कृष्ट छ ।शंकर लामिछानेको कथा । प्रवीण खतिवडाको नाट्य रूपान्तरणसहितको निर्देशन । नाटकमा प्रमुख पात्र डा. सिग्देलको भूमिकामा रंगकर्मी सुनील पोखरेल, उनको सहायक डा. चौलागाईंको भूमिकामा राजकुमार पुडासैनी । नेपथ्यमा आत्माको भूमिकामा निशा शर्मा । प्रहरीको भूमिकामा विजय बराल, घनश्याम जोशी, सुरज तमु, अर्जुन शिवाकोटी, मौसम खडका, आलोक थामी, सुमित तामाङ र वृद्धको भूमिकामा राज न्यौपाने । अभिनय बेजोड छ ।मनोविज्ञानमा आधारित नाटक मञ्चन गर्नु यसै पनि गाह्रो हुन्छ भनिन्छ । तर खरो उत्रेका छन् प्रवीण । विषय फरक, युवापुस्तालाई तान्ने खालको ।आत्मा छ वा छैन भन्ने कुरामा विवाद छ, तर्क दुवैतिर छन्, सशक्त पनि छन् । तर त्यससम्बन्धी कुरामा नलागी सतही पाराले आत्मालाई पर्गेलिएको छ, शायद समयको सीमितता पनि हुनसक्छ । भूतप्रेत छ भने आत्मा पनि छ, देवता पनि होलान् । यस विषयमा पनि नाटकले आफ्नै किसिमको तार्किक विवेचना दिने प्रयास गरेको छ । नाटकको आत्मासम्बन्धी धारणामा कति सहमत होलान्, कति नहोलान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । सबै सहमत हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । त्यसमा सहमति असहमति जे भए पनि मनोवैज्ञानिक कोणबाट आम मानिसको मनमा उब्जने विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्न नाटक सक्षम छ ।यति गम्भीर विषय उठान गर्ने नाटकले अन्ततिर केही हास्यास्पद तरिकाले ‘दर्शकवृन्द, यो सबै नाटक हो’ भनेर टुंग्याइएको छ । अनि आत्मासम्बन्धी गम्भीर खोजअनुसन्धानमा लाग्नेहरूले आत्महत्याकै बाटो अँगाल्छन् त ? खोजअनुसन्धानमा जुट्नेहरू आफैं पागल हुन्छन् र ? रक्सी र चुरोट सेवन नगरी गम्भीर अनुसन्धानमा जुट्न सकिँदैन त ? यस्ता प्रश्नहरू दर्शकका मनमा बारम्बार उठ्छन् । नाटक यसरी अघि बढ्छ अँध्यारो मञ्चमा प्रकाश छिरेसँगै एकाएक चहलपहल बाक्लिन्छ । प्रहरीहरूको बाक्लो उपस्थिति छ । मञ्चको देब्रे कुनामा कुर्सीमा बसेरै एक डाक्टरले कन्चटमा गोली हानी आत्महत्या गरेका छन् । प्रहरीहरू केरकारमा व्यस्त छन् ।दायाँतर्फ डाक्टरका सहयोगी बर्बराइरहेका छन्, ‘मलाई डाक्टर हरिहर सिग्देलको आत्मासँग कुरा गर्न दिनुहोस् । यसो हुन सक्यो भने डाक्टर सिग्देलको जिन्दगीभरको खोजले सार्थकता पाउनेछ ।’ सहायक डाक्टर अतुल चौलागाईंका यस्ता भनाइ प्रहरीलाई हास्यास्पद र अनौठो लाग्छ । उता नाटक अघि बढ्दै जान्छ, दर्शकका मनमा विचार सल्बलाउँछ– ‘के आत्मा हुन्छ ? हुन्छ भने कस्तो हुन्छ ? के आज आत्मा नै यहाँ ल्याएर देखाइदिन्छन् कि के हो ?’ भव्य साजसज्जाले कुतूहल जगाइदिन्छ ।डा. सिग्देल नवीन खोजमा जुटेका छन् । उनको विचारमा पहिल्यै मरिसकेका विद्वानहरूको आत्मालाई सम्मोहन गरी जीवित व्यक्तिमा ल्याउन सके तत्तत युगका धेरै रहस्य पत्ता लाग्छन् अनि आजका लागि त्यो ठूलो उवलब्धि हुन्छ । उनी न्युटन, आइन्स्टाइन, कार्ल माक्र्स, एरिस्टोटल, लक्ष्मीप्रसाद, भूपी आदिका आत्मा बोलाएर इतिहासको रहस्य उधिन्न सकिने ठान्छन् । त्यस्तै यसो गर्न सके नेपालमा घटित दरबार हत्याकाण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, निर्मला काण्ड आदिका बारेमा पीडित वा मृतककै मुखबाट सुन्न सकिने थियो भनेर डा. सिग्देल उत्साहित हुन्छन् ।आफूले उपचार गरिरहेका वृद्ध बिरामीको बर्बराइ सुनेर एवं व्यवहार देखेर अचम्मित हुनछन् डा. सिग्देल । आफ्नो सहायक डाक्टरको मृत पत्नीको आत्मासँग वार्तालाप गरेपछि स्तम्भित एवं उत्साहित हुन्छन् । त्यसै वार्तालापपछि हौसिन्छन् । आत्मालोकमा प्रवेश गर्न जोसिन्छन् । आफू त्यहाँ गएपछि गर्ने कामहरूको विस्तृत योजना सहायकलाई बुझाएर रहस्यको गर्तभित्र डुबुल्की मार्न कम्मर कस्छन् । डा. सिग्देल आफैं मरेर आफ्ना सहायक डा. चौलागाईंसँग आत्मालाप गर्ने बाटोमा अघि बढ्छन् । आफैं आत्मालोकमा पुगेर विभिन्न आत्मासँग भेटेर रहस्यमयी घटनाहरूको गाँठो फुकाउन आत्महत्याको बाटो रोज्छन् । अब के हुन्छ ?नाटक अन्त्यबाट सुरु भएको छ । अनि फेरि अन्तमा उहीँ पुगेर जोडिएको छ । यो हेरिसकेपछि दर्शकका मनमा प्रश्न उठ्छ– के डाक्टर सिग्देलले गरेको आत्महत्याले अचम्म किसिमको सत्यको खोजी हुन सम्भव छ ? उनका सहयोगी डाक्टर चौलागाईंले यो कुरा सिद्ध गर्न सक्लान् ?यति हुँदाहुँदै प्रहरीले दर्शकलाई नै घटनाको साक्षी बनाएका छन् । सहायक डाक्टरको कुरामा पत्यार मान्ने कि नमान्ने फसाद प्रहरीलाई छ । डा. चौलागाईंको कुरा पत्याएर झन्झट मोल्ने पक्षमा प्रहरी देखिँदैन । हत्याको अभियोग उनैलाई लाउने सुरमा रहेको देखिन्छ प्रहरी, तत्काल हिरासतमा पठाइन्छ उनलाई ।दर्शकको जिज्ञासा यथावत् रहन्छ । एउटा कुतूहलमा पु¥याएर छोडिएको छ । अनुमान लगाउन ठाउँ छोडिएको छ । यद्यपि नाटकमा ‘शरीर मरे पनि आत्मा अस्तित्वमै छ’ भन्ने धारणालाई टेवा दिने काम भएको छ । नाटकले एउटा सुषुप्त आम प्रश्नलाई जागाइदिएको छ । नाटकले आत्महत्याको वकालत गरेको त होइन कतै भन्ने प्रश्न पनि उब्जन्छ । तर लेखकले समाजकै कथा लेखेका हुनाले यो समाजकै स्वाभाविक चित्रण हो भन्न सकिन्छ । साथै नाटकको अन्त्यमा ‘दर्शकवृन्द, यो सबै नाटक हो’ भनेर नाटकका सबै कमीकमजोरी एवं नकारात्मक पाटाहरूलाई छोप्ने काम गरिएको छ । यो निकै चलाखीपूर्ण काम हो भन्न सकिन्छ ।हामीकहाँ कतिपय मनोविश्लेषक तथा चिकित्सकहरू डा. हरिहर सिग्देलकै जस्तो अवस्थामा पनि छन् । मनोवैज्ञानिक तथा अनुसन्धाताहरूमा डा. सिग्देलकै जस्तो आफ्नो रिसर्चमा बेहद डुब्नसक्ने स्वभाव हुनु पनि नौलो होइन । एकोहोरो भएर कुनै कुरामा लागिपर्ने मानिसमा हदैसम्म चरम विन्दुमा पुग्ने लक्षण हुन्छ नै । त्यसैले उसले यस कुरालाई सहज स्वाभाविक रूपमै लिनुपर्ने हुन्छ । अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीहरूमा गम्भीरता खासै देखिँदैन । उनीहरू हास्य कलाकारको भूमिकामा प्रस्तुत भएका हुन् कि भनेजस्तो पनि लाग्छ । विषयको गम्भीरतासँग उनीहरूको तालमेल उति मिल्नसकेको देखिँदैन ।र अन्त्यमा,नाटकमा थोरै पात्र, थोरै दृश्य र कम संवाद भए पनि दर्शक बाँधिइरहन्छन् । नाटकले करिब सवा घण्टा केही प्रश्नको जवाफ दिँदै, केही प्रश्न उब्जाउँदै अनि केही हँसाउँदै दर्शकको ध्यान यताउता जानबाट रोक्छन् ।निर्देशन र अभिनय त उत्कृष्ट छन् नै, प्रकाश र संगीतले नाटकका दृश्यलाई थप मोहक बनाउन भूमिका खेलेका छन् । प्रकाश परिकल्पना सुनील पोखरेल, राजकुमार पुडासैनी, प्रवीण खतिवडा र उमेश तामाङको समूहले नै परिकल्पना गरेको हो भने संगीतमा निर्देशक प्रवीणले उत्सव बुढाथोकीको साथ पाएका छन् ।समग्रमा नाटक सशक्त छ, उत्कृष्ट छ, दर्शकको रोमरोममा रोमाञ्च खडा गर्छ । यस उसले गर्दा प्रवीण खतिवडा र उनको टिम बधाईका पात्र बनेका छन् ।
१८ श्रावण २०७६, शनिबार १२:५८
गत मंगलवार मण्डला थिएटर अनामनगरमा मीमांसा हेरेपश्चात अझैसम्म त्यसको दंश अनुभव गर्दैछु । सक्ड, स्तम्भित । आत्माको रहस्य उधिन्न, आत्माको मीमांसा गर्न मञ्चित नाटक धेरै हदसम्म उत्कृष्ट छ ।
शंकर लामिछानेको कथा । प्रवीण खतिवडाको नाट्य रूपान्तरणसहितको निर्देशन । नाटकमा प्रमुख पात्र डा. सिग्देलको भूमिकामा रंगकर्मी सुनील पोखरेल, उनको सहायक डा. चौलागाईंको भूमिकामा राजकुमार पुडासैनी । नेपथ्यमा आत्माको भूमिकामा निशा शर्मा । प्रहरीको भूमिकामा विजय बराल, घनश्याम जोशी, सुरज तमु, अर्जुन शिवाकोटी, मौसम खडका, आलोक थामी, सुमित तामाङ र वृद्धको भूमिकामा राज न्यौपाने । अभिनय बेजोड छ ।
मनोविज्ञानमा आधारित नाटक मञ्चन गर्नु यसै पनि गाह्रो हुन्छ भनिन्छ । तर खरो उत्रेका छन् प्रवीण । विषय फरक, युवापुस्तालाई तान्ने खालको ।
आत्मा छ वा छैन भन्ने कुरामा विवाद छ, तर्क दुवैतिर छन्, सशक्त पनि छन् । तर त्यससम्बन्धी कुरामा नलागी सतही पाराले आत्मालाई पर्गेलिएको छ, शायद समयको सीमितता पनि हुनसक्छ । भूतप्रेत छ भने आत्मा पनि छ, देवता पनि होलान् । यस विषयमा पनि नाटकले आफ्नै किसिमको तार्किक विवेचना दिने प्रयास गरेको छ । नाटकको आत्मासम्बन्धी धारणामा कति सहमत होलान्, कति नहोलान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । सबै सहमत हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । त्यसमा सहमति असहमति जे भए पनि मनोवैज्ञानिक कोणबाट आम मानिसको मनमा उब्जने विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्न नाटक सक्षम छ ।
यति गम्भीर विषय उठान गर्ने नाटकले अन्ततिर केही हास्यास्पद तरिकाले ‘दर्शकवृन्द, यो सबै नाटक हो’ भनेर टुंग्याइएको छ । अनि आत्मासम्बन्धी गम्भीर खोजअनुसन्धानमा लाग्नेहरूले आत्महत्याकै बाटो अँगाल्छन् त ? खोजअनुसन्धानमा जुट्नेहरू आफैं पागल हुन्छन् र ? रक्सी र चुरोट सेवन नगरी गम्भीर अनुसन्धानमा जुट्न सकिँदैन त ? यस्ता प्रश्नहरू दर्शकका मनमा बारम्बार उठ्छन् ।
नाटक यसरी अघि बढ्छ
अँध्यारो मञ्चमा प्रकाश छिरेसँगै एकाएक चहलपहल बाक्लिन्छ । प्रहरीहरूको बाक्लो उपस्थिति छ । मञ्चको देब्रे कुनामा कुर्सीमा बसेरै एक डाक्टरले कन्चटमा गोली हानी आत्महत्या गरेका छन् । प्रहरीहरू केरकारमा व्यस्त छन् ।
दायाँतर्फ डाक्टरका सहयोगी बर्बराइरहेका छन्, ‘मलाई डाक्टर हरिहर सिग्देलको आत्मासँग कुरा गर्न दिनुहोस् । यसो हुन सक्यो भने डाक्टर सिग्देलको जिन्दगीभरको खोजले सार्थकता पाउनेछ ।’ सहायक डाक्टर अतुल चौलागाईंका यस्ता भनाइ प्रहरीलाई हास्यास्पद र अनौठो लाग्छ ।
उता नाटक अघि बढ्दै जान्छ, दर्शकका मनमा विचार सल्बलाउँछ– ‘के आत्मा हुन्छ ? हुन्छ भने कस्तो हुन्छ ? के आज आत्मा नै यहाँ ल्याएर देखाइदिन्छन् कि के हो ?’ भव्य साजसज्जाले कुतूहल जगाइदिन्छ ।
डा. सिग्देल नवीन खोजमा जुटेका छन् । उनको विचारमा पहिल्यै मरिसकेका विद्वानहरूको आत्मालाई सम्मोहन गरी जीवित व्यक्तिमा ल्याउन सके तत्तत युगका धेरै रहस्य पत्ता लाग्छन् अनि आजका लागि त्यो ठूलो उवलब्धि हुन्छ । उनी न्युटन, आइन्स्टाइन, कार्ल माक्र्स, एरिस्टोटल, लक्ष्मीप्रसाद, भूपी आदिका आत्मा बोलाएर इतिहासको रहस्य उधिन्न सकिने ठान्छन् । त्यस्तै यसो गर्न सके नेपालमा घटित दरबार हत्याकाण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, निर्मला काण्ड आदिका बारेमा पीडित वा मृतककै मुखबाट सुन्न सकिने थियो भनेर डा. सिग्देल उत्साहित हुन्छन् ।
आफूले उपचार गरिरहेका वृद्ध बिरामीको बर्बराइ सुनेर एवं व्यवहार देखेर अचम्मित हुनछन् डा. सिग्देल । आफ्नो सहायक डाक्टरको मृत पत्नीको आत्मासँग वार्तालाप गरेपछि स्तम्भित एवं उत्साहित हुन्छन् । त्यसै वार्तालापपछि हौसिन्छन् । आत्मालोकमा प्रवेश गर्न जोसिन्छन् । आफू त्यहाँ गएपछि गर्ने कामहरूको विस्तृत योजना सहायकलाई बुझाएर रहस्यको गर्तभित्र डुबुल्की मार्न कम्मर कस्छन् ।
डा. सिग्देल आफैं मरेर आफ्ना सहायक डा. चौलागाईंसँग आत्मालाप गर्ने बाटोमा अघि बढ्छन् । आफैं आत्मालोकमा पुगेर विभिन्न आत्मासँग भेटेर रहस्यमयी घटनाहरूको गाँठो फुकाउन आत्महत्याको बाटो रोज्छन् ।
नाटक अन्त्यबाट सुरु भएको छ । अनि फेरि अन्तमा उहीँ पुगेर जोडिएको छ । यो हेरिसकेपछि दर्शकका मनमा प्रश्न उठ्छ– के डाक्टर सिग्देलले गरेको आत्महत्याले अचम्म किसिमको सत्यको खोजी हुन सम्भव छ ? उनका सहयोगी डाक्टर चौलागाईंले यो कुरा सिद्ध गर्न सक्लान् ?
यति हुँदाहुँदै प्रहरीले दर्शकलाई नै घटनाको साक्षी बनाएका छन् । सहायक डाक्टरको कुरामा पत्यार मान्ने कि नमान्ने फसाद प्रहरीलाई छ । डा. चौलागाईंको कुरा पत्याएर झन्झट मोल्ने पक्षमा प्रहरी देखिँदैन । हत्याको अभियोग उनैलाई लाउने सुरमा रहेको देखिन्छ प्रहरी, तत्काल हिरासतमा पठाइन्छ उनलाई ।
दर्शकको जिज्ञासा यथावत् रहन्छ । एउटा कुतूहलमा पु¥याएर छोडिएको छ । अनुमान लगाउन ठाउँ छोडिएको छ । यद्यपि नाटकमा ‘शरीर मरे पनि आत्मा अस्तित्वमै छ’ भन्ने धारणालाई टेवा दिने काम भएको छ । नाटकले एउटा सुषुप्त आम प्रश्नलाई जागाइदिएको छ ।
नाटकले आत्महत्याको वकालत गरेको त होइन कतै भन्ने प्रश्न पनि उब्जन्छ । तर लेखकले समाजकै कथा लेखेका हुनाले यो समाजकै स्वाभाविक चित्रण हो भन्न सकिन्छ । साथै नाटकको अन्त्यमा ‘दर्शकवृन्द, यो सबै नाटक हो’ भनेर नाटकका सबै कमीकमजोरी एवं नकारात्मक पाटाहरूलाई छोप्ने काम गरिएको छ । यो निकै चलाखीपूर्ण काम हो भन्न सकिन्छ ।
हामीकहाँ कतिपय मनोविश्लेषक तथा चिकित्सकहरू डा. हरिहर सिग्देलकै जस्तो अवस्थामा पनि छन् । मनोवैज्ञानिक तथा अनुसन्धाताहरूमा डा. सिग्देलकै जस्तो आफ्नो रिसर्चमा बेहद डुब्नसक्ने स्वभाव हुनु पनि नौलो होइन । एकोहोरो भएर कुनै कुरामा लागिपर्ने मानिसमा हदैसम्म चरम विन्दुमा पुग्ने लक्षण हुन्छ नै । त्यसैले उसले यस कुरालाई सहज स्वाभाविक रूपमै लिनुपर्ने हुन्छ ।
अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीहरूमा गम्भीरता खासै देखिँदैन । उनीहरू हास्य कलाकारको भूमिकामा प्रस्तुत भएका हुन् कि भनेजस्तो पनि लाग्छ । विषयको गम्भीरतासँग उनीहरूको तालमेल उति मिल्नसकेको देखिँदैन ।
नाटकमा थोरै पात्र, थोरै दृश्य र कम संवाद भए पनि दर्शक बाँधिइरहन्छन् । नाटकले करिब सवा घण्टा केही प्रश्नको जवाफ दिँदै, केही प्रश्न उब्जाउँदै अनि केही हँसाउँदै दर्शकको ध्यान यताउता जानबाट रोक्छन् ।
निर्देशन र अभिनय त उत्कृष्ट छन् नै, प्रकाश र संगीतले नाटकका दृश्यलाई थप मोहक बनाउन भूमिका खेलेका छन् । प्रकाश परिकल्पना सुनील पोखरेल, राजकुमार पुडासैनी, प्रवीण खतिवडा र उमेश तामाङको समूहले नै परिकल्पना गरेको हो भने संगीतमा निर्देशक प्रवीणले उत्सव बुढाथोकीको साथ पाएका छन् ।
समग्रमा नाटक सशक्त छ, उत्कृष्ट छ, दर्शकको रोमरोममा रोमाञ्च खडा गर्छ । यस उसले गर्दा प्रवीण खतिवडा र उनको टिम बधाईका पात्र बनेका छन् ।
Prevकथा : शीला
छैठौं शैक्षिक मेलामा अवलोकनकर्ताहरुको भिड, आज सम्पन्न हुँदैNext